ပန်းသီးစားသူများ: Absinthe 2.0.4
May 25 မှာ စတင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Greenpois0n ရဲ့ Absinthe ဟာ Version 2.0.4အထိရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ
iOS 5.1.1 တစ်ခုတည်းကိုသာ အလုပ်လုပ်ပါတယ် Untethered Jailbreak ဖြစ်ပါတယ်
Jailbreak လုပ်နိုင်တဲ့ device တွေကတော့ ဒီမှာပါ
Version 2.0.2 မှာ iPad 2,4 jailbreak ကို မအောင်မြင်ခဲ့သူများ version 2.0.4 ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ
iTunes က latest version ဖြစ်ရပါမယ်
Window, Mac နဲ့ Linux ဆိုပြီး (၃) မျိုးထွက်ရှိပါတယ် http://greenpois0n.com/ မှာ download ယူပါ
One Click Untethered Jailbreak ဆိုတဲ့အတိုင်း One click ပါပဲ
3GS 5.1.1 ကို version 2.0.2 နဲ့ ပြထားပါတယ်
iDevice ထဲမှာ Cydia ရောက်နေပါလိမ့်မယ်
အကယ်၍များ..... lockdown error စသည်ဖြင့် jailbreak လုပ်လို့မရခဲ့ပါလျင်
iTunes ကို repair/reinstall ပြန်လုပ်၍ PC ကို restart ချပြီးမှ jailbreak လုပ်ပါ
ညီအစ်ကိုရေကျေးဇူးကဘာာပါခင်ဗျာ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီဗျာ နောင်လဲအများကြီးရှဲနိုင်ပါစေဗျာ
08042244360 May 29, 2012 at 10:46 PM
ဆိုတာနဲ့ iPad 2,4 ဆိုတာဘယ်လိုခွဲလည်းမသိဘူး
အခုလတ်တလောက ကျွန်တော့် ipad2က ဘယ်လိုမှ
လုပ်လို့မရဘူး no support ဖြစ်နေတယ်
အားရင် နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအုံး နော်
iPhoneShaker May 30, 2012 at 6:42 PM
iPad Model Number A1219 = iPad WiFi
iPad Model Number A1337 = iPad Wi-Fi/3G
iPad Model number A1395 = iPad2Wi-Fi
iPad Model number A1396 = iPad2Wi-Fi/GSM
iPad Model number A1397 = iPad2Wi-Fi/CDMA
iPad Model number A1416 = iPad3Wi-Fi
iPad Model number A1430 = iPad3Wi-Fi/4G LTE (AT&T/GPS)(Verizon/GPS)
အစ်ကိုတို့ အကြံတစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့...။ ကျွန်တော့်မှာ iPod Touch 4G တစ်ခုရှိပါတယ်။
iOS 5.1 ပါ..Jailbreak လုပ်ပြီး Five Dock ကို ဒေါင်းတဲ့ချိန် safe mode တက်လာပါတယ်..။
ပြီးတော့ restart ပြန်ချလည်း safe mode ပဲပြန်တက်လာပါတယ်..ခုဆိုသူ့ဘာသာသူ restart ချလိုက် ပြန်တက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်..ဆက်တိုက်ပဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦးအစ်ကိုတို့ရေ..ကျွန်တော်က ခုမှစသုံးတာဆိုတော့ သိပ်မသိသေး လို့ Back-Up မလုပ်ထားမိဘူး..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလဲမသိလို့..ကူညီကြပါဦး..။
အစ်ကိုရေ..ဘာမှလုပ်လို့ကိုမရတာပါ..restart ပြန်တက်လာရင် Homescreen ပေါ်လာတယ်..slide ဆွဲမယ်ကြံကာရှိသေး သူက restart ပြန်ကျသွားတယ်.ပြီးရင်ပြန်တက်လိုက်.ပြန်ကျလိုက်.ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာ.slide တောင်ဆွဲလို့မရဘူးကူညီပါဦး..။
ကျွန်တော့် အကောင့်က wantedman96@gmail.com ပါ..ကူညီကျပါဦး..။
iPhoneShaker May 30, 2012 at 6:44 PM
restore ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ ဆိုတာလည်း ကူညီပေးပါဦး..ကျွန်တ်ေကခုမှသုံးခါစမို့လို့ပါ..။
iPhoneShaker June 1, 2012 at 9:28 AM
Device ကို iTunes နဲ့ချိတ်ပါ၊ iTunes မှာ device ပေါ်လာပါမယ် အဲဒီ device tag မှာ Update နဲ့ restore ရှိပါတယ်
5.1.1 အတွက် Untethered Jailbreak ထွက်နေပြီမို့ စိတ်ချလက်ချ update ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
5.1.1 ရသွားပြီဆိုရင် Jailbreak လုပ်လိုက်ပါ
5.1.1 က ဒေါင်းရမှာပေါ့..မြန်မာပြည်က ဆို မရလောက်ဘူးထင်တယ်..zip ဖိုင်လုပ်ပြီး တင်ထားတာရှိလားမသိဘူး..ကူညီပေးပါဦး..အရင်တစ်ခါက 5.1 ကို ဒေါင်းတာ ၂ရက်ခွဲလောက်ကြာတယ်.. နား နား ဒေါင်းတာ..IDM နဲ့ ..ခုတော့ကူညီပေးပါဦး..။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..:-)
iPhoneShaker June 1, 2012 at 4:17 PM
iPod Touch 4G အတွက် 5.1.1 လား စီစဉ်ပေးမယ်
အစ်ကို ကြိုးစားကြည့်နေပါတယ်..ဒီတစ်ညလောက်တော့ ဒေါင်းရမယ်ထင်တယ်..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်တော်တော် နဲသွားတယ်. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..အစ်ကိုလို ပြောပြတဲ့လူရှိလို့တော်သေးတယ်..ကျေးဇူးပါ..ဒါနဲ့ iPad2နဲ့3က ဗူးမပေါက်ခင်ဘယ်လို ခွဲရမလဲဆိုတာနဲနဲ ပြောပြပေးပါဦး..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..စကားမစပ် ၁၀ တန်းအောင်စာရင်းထွက်မဲ့အချိန်ကိုသိရင်လည်းပြောပြပေးပါလား.. :-)
အစ်ကို အားတော့နာပါတယ်..တစ်ညလုံးဒေါင်းတာ ၂ခုပဲရတယ်ဗျ နောက်တစ်ခုကိုဒေါင်းနေရင်း တစ်ဝက်လောက်ဆို finish ဆိုပေါ်ပေမဲ့ ၁၉၀ MB မရှိပါဘူး ပထမနှစ်ခုကိုပြန်ကြည့်တော့ ၁၂၀ MB ပဲရှိတယ်.. အားလည်းနာပါတယ်အစ်ကိုရယ်..ဖြစ်နိုင်ရင် ၁၀၀ MB လောက်ခွဲပြီးတင်ပေးပါလား..အဲ့ဆိုဒ်က upload လုပ်ရင်ပိုက်ဆံပေးရလား..ပေးရရင်တော့ မတင်ပေးပါနဲ့ ကျွန်တော်က ဘာမှမသိသေးတဲ့ fresher လေးမို့လို့ပါ..ဖြစ်နိုင်ရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးပါ..
iPhoneShaker June 2, 2012 at 11:20 PM
ဗူးရဲ့ကျောဘက်မှာ Model နံပါတ်ရှိမယ်ဆိုရင် Model နံပါတ်နဲ့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်
ဗူးနှစ်ခုကိုယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် iPad3box အပေါ်က iPad ပုံက အရောင်ပိုရင့်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်
၁၀ တန်းအောင်စာရင်းထွက်မဲ့အချိန်ကို မသိပါဘူး စိတ်မရှိပါနဲ့
upload ကပိုက်ဆံမပေးရပါဘူး တနင်္လာနေ့အထိစောင့်ပေးနိုင်မလား
ပာုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ..စောင့်နိုင်ပါတယ်..အစ်ကိုဒီလောက်ထိကူညီတာဆိုတာပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပါ..ဆိုင်မှာမေးကြည့်တော့ ၂သောင်းခွဲပေးရမှာတဲ့ အဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းမပေးဘူးဆိုပြီးပြန်လာခဲ့တာပါ..အစ်ကိုစာမြင်တော့ဝမ်းသာသွားပါတယ်..စောင့်နေပါမယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. :-)
Thanks A Lot,!!!! :-)
အစ်ကိုကြီး iPod ကအဆင်ပြေသွားပြီ..cydia က ကောင်းတဲ့ sources လေးတွေပြောပြပါလား။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..။ :-)
iPhoneShaker June 5, 2012 at 5:58 PM
အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင် downlaod link တွေ ပြန်ဖျက်လိုက်ပါမယ်
အမြဲတမ်းသုံးဖြစ်တဲ့ sources တွေက
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်လည်း iPod 5.1.1 လိုချင်လို့ ဒေါင်းတာ နံပါတ် ၁၂ ကစပြီး Connection to server d2.minus.com failed (The server is not responding.)ပဲပေါ်တယ်ဗျ..ပိာုတစ်ယောက်တော့ အဆင်ပြေသွားပြီတဲ့..ဘာဖြစ်လို့လဲ တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါလား..။
အစ်ကို ကျေးဇူးဗျ..ရပါပြီ တစ်ခုပဲ မေးမလို့ဗျ..နံပါတ်၁၅က2kb လိုနေတယ်.အဲ့တာရပါ့မလားဗျ.ကျေးဇူး.၊
iPhoneShaker June 7, 2012 at 4:02 PM
ရပါတယ် hjSplit နဲ့ပြန် join ကြည့်ပါ
marcury July 18, 2012 at 1:51 PM
i have done jailbreak for ipod touch 4G. it was successful. But after jailbreak, Rocky Racoon 5.1.1 Untether is automatically installed itself. But nothing appear on screen excpet cydia. then i add the source. that also when loading, show eror when going to finish. pls help me.
iPhoneShaker July 18, 2012 at 2:06 PM
Don't mention about Rocky Racoon. Do not uninstall it. Please read "Details" of Rocky Racoon in Cydia.
Which source did you add on Cydia?
I have sometimes issue adding sinfuliphone source like you. Don't worry about it.
ကျွန်တော့်အကောင့်က wantedman96@gmial.com ပါ..ကူညီပေးပါဦး၊
ကျွန်တော့် အိုင်ပက်ဂျေးဘရိတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးစရာရှိလို့ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ipad25.1.1ကို jailbreakလုပ်ပြီး cydia ကို ဖွင့်လိုက်တာ error safe mode ဖြစ်လို့ အိုကေကို လုပ်လိုက်တဲ့အခါ cydia ကို ရှာမတွေ့ဘဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်ခါ ဂျေးဘရိတ်ပြန်လုပ်ကြည့်တော့ လုပ်ပြိးသားဆိုပြီး စာတန်းပေါ်ပါတယ်။ အိုက်ပက်ထဲမှာ ဖွင့်ကြည့်တော့လည်း စင်ဒီယာကို ရှာမတွေ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာဖောင့်ကတော့ အသုံးပြုလို့ရသွားပါတယ်။ ကီးဘုတ်ကတော့ အသုံးပြုလို့မရပါဘူး။ အဓိကကတော့ ဂျေးလုပ်ထားပေမယ့် စင်ဒီယာ ပျောက်နေခြင်းပါပဲ။ အဲဒါ ဘာလုပ်ရမလဲ ကျွန်တော့်ကို အကြံပေးစေချင်ပါတယ်။
iPhoneShaker June 2, 2012 at 11:25 PM
Jailbreak လုပ်ထားပြီးမှ Cydia ပျောက်နေတယ်ဆိုရင် jailbreak ရဲ့ ရသ မပြည့်စုံပါဘူး
iOS version အသစ်မထွက်သေးသမျှ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက် 5.1.1 ကို restore နဲ့
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်က အခုမှ iphone ကိုင်ဖူးတာပါ..3GS ..4.2.1 တင်ထားပြီးသားပါ။modem firmware 5.15.04 ပါ။5.1.1 တင်ချင်ပါတယ် ဒေါင်းလည်းပြီးပါပြီ။ဘယ်ကစပြီးလုပ်ရမှန်းမသိလို့ပါ။ကူညီပါဦးဗျာ.....
iPhoneShaker June 20, 2012 at 10:40 AM
5.1.1 ကို update လုပ်တာလွယ်ပါတယ် iPhone ကို iTunes မှာ backup လုပ်ပြီး update ကိုနှိပ်ပါ 5.1.1 ဝင်သွားပါမယ်
iTunes account, Authorize & Deauthorize အကြောင်းကို "သိကောင်းစရာ" ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
5.1.1 ဝင်ပြီးသွားရင် jailbreak လုပ်ပါ iOS6မထွက်သေးတဲ့အတွက် update လုပ်ရင် အချိန်မီပါသေးတယ်
thurazaw January 9, 2013 at 8:02 PM
ကျွန်တော့်ဖုန်းက 4G ပါ ဗားရှင်း 5.1.1
iTools ကလဲမသိပါဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပါအုံး
iPhoneShaker January 10, 2013 at 3:55 PM
iPhone နဲ့ PC နဲ့ ချိတ်ပြီးရင် My Computer ကို ဖွင့်ပြီး iPhone ရဲ့ folder ပေါ်/မပေါ် စစ်ကြည့်ပါ